Afarta Dhibaato Ee Ragaadiyey Manchester United Ee Ralf Rangnick Laga Sugayo Inuu Xalliyo - Laacib
HomeWararka CiyaarahaAfarta Dhibaato Ee Ragaadiyey Manchester United Ee Ralf Rangnick Laga Sugayo Inuu Xalliyo
Khabiirka u dhashay waddanka Germany ee Ralf Rangnick ayaa loo magacaabayaa tababaraha ku-meelgaadhka ah ee Manchester United, waxaana kaliya la sugayaa kaliya shaacinta Red Devils iyo waqtiga uu kulankiisa koowaad hoggaamin doono kooxda.
Ralf Rangnick oo hore usoo layliyey kooxo ay ku jiraan RB Leipzig ioyo Schalke ayaa saxeexi doona heshiis lix bilood uu ku ahaanayo tababaraha ku-meelgaadhka ah ee Manchester United ee xilkan haynaya illaa dhamaadka xilli ciyaareedkan, waxaana uu markaas kaddib muddo laba sannadood ah xil lataliyenimo ka hayn doonaa United.
Xagaaga ayay Manchester United si rasmi ah u magacaabi doontaa tababaraheeda cusub, lamana filayo in Ralf Rangnick uu ka mid noqdo sababtoo ah, waxa haddaba la sheegayaa in Red Devils ay u bandhigtay inuu muddo lix bilood ka badan kooxda maamulo hase yeeshee uu iska diiday.
Ralf Rangnick ma qabanin shaqo tababarenimo tan iyo markii uu ka tegay RB Leipzig sannadkii 2019, waxaana laba sannadood iyo dheeraad kaddib uu kusoo laabanayaa shaqada isaga oo ay tahay inuu xal u helo dhibaatooyin waaweyn oo ka jira Old Trafford.
Hirgelinta qaaciiddo cad oo ay kooxdu guulo ku gaadhi karto
Ralf Rangnick waxa uu dhaxalayaa Manchester United oo ay Liverpool kaga badisay 5-0, Man City ku garaacday 2-0, Watford na ku burburisay 4-1, halka West Ham United ay wareeggii ugu horreeyey kaga cidhib-tirtay tartanka Carabao Cup.
Manchester United waxa la fahamsan yahay inay ka luntay qaaciidadii guusha ay ku heli lahayd, iyadoo Ole Gunnar Solskjaer muddo saddex sannadood ah aanu qaadanin falsafad ciyaareed oo guul ama geeri uu ku dhegsanaado.
Ralf Rangnick ma aha tababare difaac, waase cadaadiye iyo mid afka hore kooxaha ku qabta. Waxa uu inta ugu badan ku ciyaaraa 4-4-2 oo uu u yaqaano shaxda dheemanta, sidoo kalena 4-3-3 ayaa uu mararka qaarkood ku dheelaa.
Waxa uu aad uga shaqaysiiyaa labada difaac ee dhinacyada, taas oo ka dhigan in Luke Shaw iyo Wan-Bissaka ay u taallo inay ka shaqeeyaan difaac illaa weerar.
Xallinta mushkiladda difaaca
Manchester United waxay ka dhimatay difaaca, xilli ciyaareedkana waxay awoodi weyday inay shabaqeeda ilaashato. Siddeeddii ciyaarood ee ugu dambeeyey dhamaan tartamada, waxa laga dhaliyey 19 gool.
Wan-Bissaka, Harry Maguire iyo Luke Shaw ayaa dhamaantood su’aalo la gelinayay usbuucyadii u dambeeyey, sidoo kalena Lindelof ayaan isagu hadal-qaadba lahayn oo liiska dhimashada ku jira.
Varane oo dib usoo laabta ayaa uu Ralf Rangnick ka dhigi karaa xalka difaaca, laakiin in uu helo qaab kale oo afarta dambe ay horumar ku sameeyaan, kuna joojiyaan kubbadaha diciifka ah ee kadhalanaya ayaa laga sugayaa.
Haybaddii iyo karaamadii Old Trafford oo uu soo celiyo
Garoonka Old Trafford oo ay kasoo xaadiraan 75,000 qof oo taageereyaal ah, waxa ka luntay sirtii kooxaha kale cabsi-gelin jirtay, waxaanu isku beddelay meel iyaga lagu garaaco saddexdii sannadood ee ugu dambeeyey.
Manchester United wax guul ah kuma aanay helin afartii ciyaarood ee ugu dambeeyey horyaalka Premier League ee ay ku dheeshay garoonkeeda Old Trafford, kuwaas oo saddex ka mid ah lagaga badiyey midna ay barbarro ku gashay. Aston Villa, Liverpool iyo Manchester City ayaa guulo waaweyn ku gaadhay, halka Everton ay barbarro kula gashay United.
Xilli ciyaareedkan, Manchester United waxay tahay kooxda 13aad ee ugu rikoodhka wanaagsan garoonkeeda kooxaha horyaalka Premier League, taas oo macnaheedu tahay inay jiraan 12 kooxood oo ka wanaagsan marka ay garoomadooda ku ciyaarayaan.
Ralf Rangnick ayaa laga doonayaa inuu soo celiyo sirtii kooxaha kale cabsi-gelin jirtay, kana dhigo Old Trafford qalcad marka ay kooxaha kale soo galaan ay ku dareemaan walwal, sidii hore looga bartay.
Ralf Rangnick ayaa laga sugayaa inuu soo celiyo karaamadii Old Trafford,.
Cristiano Ronaldo oo uu ka caawiyo inuu goolal badan dhaliyo
Cristiano Ronaldo waxa uu ahaa halyeyga Manchester United sababta ugu noqday inay u gudbaan wareegga 16ka Champions League. Waxa uu goolashiisa guulo ugu go’aamiyey kulamadii Villarreal ee labadii lugood ba, Atalanta oo lugtii hore ah iyo xataa lugtii labaad ee kooxda Talyaaniga oo uu barbarraha u keenay.
Sidaas oo ay tahay, toddobadii ciyaarood ee ugu dambeeyey horyaalka Premier League waxa uu dhaliyey hal gool oo kaliya, waxaana laga doonayaa tababaraha cusub inuu helo qaabkii uu Ronaldo ku heli lahaa goolal maadaama uu yahay ciyaartoyga loogu kalsoonida badan yahay dhinaca gool-dhalinta ee ay Manchester United haysato.